हरियो तरकारी मध्ये सबैभन्दा बढी फाइदाजनक हुन्छ कर्कलोको पात…हेर्नुहोस् ।
हामीले खाने हरियो साग, तरकारी मध्ये कर्कलोको साग पनि पर्छ । कर्कलोको साग सजिलै भेटेपनि अन्य साग जस्तो लोकप्रिय भने छैन । कर्कलोको सागको बारेमा थाहा नभएको सायदै कोहि होलान् तर पनि कर्कलोको साग भने हामीले आफ्नो नियमित भोजनमा त्यसलाई समावेश गर्दैनौँ ।
किनभने कर्कलोको साग अन्य सागभन्दा बनाउँदा र खाँदा कोक्याउने हन्छ । कर्कलोको साग हाम्रो स्वा’स्थ्यको लागि अन्य साग वा तरकारी भन्दा बढी फाइदाजनक हुन्छ । कर्कलोको पात खानाले धेरै प्रकारका रो’गबाट हामी बच्न सक्छौँ । कर्कलोको सागमा भिटमिन ए ,बी, र सी, क्याल्शियम, प्रोटीन, पोटाशियम, आइरन, कार्बोहाइड्रेट र ऐन्टी–अक्सिडेन्ट भरपूर मात्रामा पाइन्छ ।
कर्कलोको पातमा भिटमिन ए आँखाको लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसले आँखाको रोशनी बढ्छ र मां’सपेशिहरु पनि बलियो हुन्छ । साथै भिटमिन सी ले अनुहारको चाउरीपना कम गर्नमा मद्दत गर्छ । क्या’ल्शियम ह’ड्डिको निर्माण वा बलियो बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
यदि तपाई कर्कलोको पात सेवन गर्नु हुन्छ भने त्यसले मोटोपन पनि नियन्त्रण गर्नमा मद्दत गर्छ । किनकी कर्कलोको पातले भोक लाग्न दिदैँन। साथै यसमा पाइने फाइबरले मेटाबोलिज्मलाई पनि सक्रिय बनाउँछ जसले शरीरको तौल सँधै नियन्त्रणमा रहन्छ । त्यति मात्र नभई कर्कलोको पातको सेवनले जो’र्नीको दुखाईमा पनि राहत प्रदान गर्छ। कर्कलोको पातलाई बेसनमा पकौडा बनाएर खानु पनि फाइदाजनक हुन्छ ।
खानामा टमा’टर प्रयोग गर्नुका केहि फा’इदा र बेफाइ’दाहरू यस प्रकार छन् ! टमाटर खानुका फाइदाहरू १. टमाटरबाट भिटा’मिन सी, लाइ’कोपीन, भिटा’मिन, पोटा’शियम पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । साथै यसको प्रयोगले कोले’स्ट्रोल कम गर्न पनि सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । २. मानिसलाई वज’न घटा’उन पनि गोलभेडा फाइदाजनक छ ।
तर टमाटरको सवैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको पकाउँदा पनि त्यसको पोषक तत्व जाँदैन । ३. बिहान पानी नपिइकन पाकेको टमाटर खादा स्वा’स्थ्यको लागि निकै फाइदा पुग्छ । यसले विभिन्न रो’गबाट छुट्कारा दिन्छ । ४. यदि बच्चालाई सुख्खा रो’ग भएको खण्डमा प्रत्येक दिन एक गिलास टमाटरको जुस पिलाउँदा सुधार हुन सक्छ ।
त्यस्तै बच्चाको मान’सिक तथा शारीरिक विकासका लागि टमाटर अत्यन्तै फाइदाजनक हुन्छ । ५.मो’टोपन घटाउनका लागि पनि टमाटरको प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रतिदिन एक देखि दुई गिलास टमाटरको जुस पिउनाले व’जन घट्छ । ग’र्भाव’स्थामा टमाटरको सेवन गर्नु बहुत फइदा हुन्छ । ६. यदी पे’टमा जु’का वा अन्य कि’रा भएको खण्डमा टमाटरमा मरि’च मिसाएर खाँदा फाइदा हुन्छ ।
७. काँचो ट’माटरमा कालो नुन मिलाएर खानाले अनुहारमा चमक आउँछ । र, टमाटरको गुदीलाई अ’नुहारमा द’ल्दा पनि निकै फाइदा हुन्छ । टमाटर प्रयोग गर्नुका बेफाइदाहरु १. टमाटरको सेवनले तपाईंलाई एसि’डिटी हुन्छ । वास्तवमा यसमा अधिक मात्रामा अ’म्ल हुन्छ जसकारण यसको सेवनले तपाईको पेटमा अम्लियता बढ्छ र यो एसि’डिटीको कारण बन्छ । २. यदी तपाईलाई ग्याँसको समस्या छ भने टमाटरको प्रयोग कम नै गरेको राम्रो ।
टमाटरले शरिरमा ग्याँस पैदा गर्छ । ३. टमाटरको प्रयोग गर्दा यसको बिउलाई तपाईले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न । यस्ता बिउहरुका कारण शरिरमा पत्थ’री हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । यो कि’ड्नीमा पुगेर सजिलै रुपमा स्टोन निर्माण गर्छ । ४. टमाटरमा भएको ट’र्पिन्स नामक तत्वले तपाईको शरिरमा दु’र्गन्ध फैलाउने काम गर्छ ।
पाच’नका समयमा यसको विघटन, शरिरको दुर्ग’न्घ पैदा गर्छ । ५.आजकाल अर्गानिक टमाटरको सट्टा इन्जे’क्सन वा के’मिकलको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका टमाटर बजारमा उपलब्ध हुन्छ जसको सेवनले तपाईमा बेचै’नी, ब्ल’डप्रेसर लगाएतका अन्य कैयौं स्वाुस्थ्य समुस्या निम्त्याउन सक्छ ।
निचोरेर फालेका कागतीकाे खो’स्टाका यस्ता अनौठा फाई’दा कागती अत्याधिक प्रयोग हुने फल हो । चियादेखि अनु’हार चमकाउनसम्म कागतीको प्रयोग हुन्छ । यसको अचार पनि त्यतिकै स्वादिलो हुन्छ । कागतीले नुहाँउदा चाँ’या पर्ने समस्या हट्छ । यतिमात्र होइन, निचोरेको कागतीका पनि धेरै फाइदा छन् । तर हामी थाहा नभएर त्यसको प्रयोग भने गर्दैनौं ।
भाडा डढेको दाग मेटाउन कहिलेकाही खाना पकाउदा भाँडा डढ्न सक्छ । खाना डढेर कुकर वा कुनै भाँडाको भित्र र बाहिर कालो हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मन तातो पानीमा निचोरेको कागतीलाई केही बेर डुबाउने र त्यसले रगेटेर माझ्नाले डढेको दाग हट्छ । यी हुन निचोरेको फालेका कागतीका चार अनौठा फाइदा
कपडामा चमकपन ल्याउन सेतो लुगामा कालो वा अन्य टाटो लागेर हैरान हुनु भएको छ ? आत्तिनु पर्दैन, फालिएको कागतीलाई पानीमा निचोरेर लुगालाई १५ मिनेट छोडिदिनुहोस । १५ मिनेटपछि ती लुगालाई साबुन पानीले साबिक झै धुनुहोस । तपाईको लुगाको चमक पूर्ववत अवस्थामा फर्किन्छ । कागती पानीले लुगाको जुनसुकै फोहर सफा बनाइदिन्छ ।
हातको चिल्लो हटाउन तपाईले याद गर्नु भएकोले होला प्राय रेस्टुरेन्टमा सानो कचौरा वा गिलासमा मन तातो पानीमा कागती डुबाएर राख्ने गरिन्छ । किन राखिन्छ कागतीलाई यसरी ? रेस्टुरेन्टमा निकै चिल्लो तथा मसलादार खाना खाँद हातमा लागेको चिल्लो हटाउन कागती पानीले मद्धत गर्ने भएकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । निचोरेको कागतीलाई हातमा दल्नाले चिल्लोपन हट्छ । साथै कागतीमा हुने एसिडयुक्त तत्वले नङको फोहर फाली चमक गराउँछ ।
घरलाई बासनादार बनाउन कागतीको बासना आफैमा मगमग आउने भएकोले यसले वातावरणलाई सुगन्धित बनाउछ भने अनावश्यक झिंगा पनि फैलिदैनन् । सम्भव भए घरको वरिपरि कागती लगाउनुहोस । घरका कुना काप्चा ढुडी लागेर वा हावा नछिरेर नराम्रो गन्ध त आएको छैन ? यस्तो बेलामा तपाईले कोठाका कुना कुनामा अत्तर छर्ने चिन्ता लिनु पर्दैन । फालिएका एकदुई ओटा कागती भए पुग्छ ।
Previous महिलाको से’तोपानी बग्ने देखि पुरुषको अण्ड’कोष सुनिने सम्म एउटै घरायसी औषधी जिरा…हेर्नुहोस ।
Next केरा मात्र होइन यसको फूल पनि हुन्छ लाभदायक, क्यान्सर लगायत यी ७ समस्याबाट दिन्छ छुटकारा…हेर्नुहोस् ।